Filazantsara araka an' i Matio - Wikipedia
Filazantsara araka an' i Matio
(tonga teto avy amin'ny Evanjelin'i Matio)
Ny Filazantsara araka an' i Matio, na Vaovao Mahafaly araka an' i Matio, na Filazantsara nosoratan' i Matio, dia voalohany ao amin' ny Filazantsara efatra ao Testamenta Vaovao ao amin' ny Baiboly. Ny lohahevitra ny amin' ny Fanjakan' ny Lanitra no hita ho ivon' ny fampianaran' i Jesoa (na Jesosy) ao amin' ity evanjely ity, izay hamafisin' ny fiantsoana an' i Jesoa ho "Zanak' i Davida". I Jesoa no ilay mpanjaka izay tsy maintsy ho avy, efa nambaran' ireo mpaminany: izay no hafatra tian' io vaovao mahafaly io hampitaina. Nitondra fanomezana ho an' ity "mpanjakan' ny Jiosy" ity (na "mpanjakan' ny Jody) ireo Magy (na Majy) (Mat. 2.2). Nanambara i Jesoa fa "akaiky ny Fanjakan' ny Lanitra" (Mat. 4.17) ary ho an' izay mibebaka izy (Mat. 4.7) izay mahalala ny fitadiavany an' Andriamanitra (Mat. 5.1-10). Nefa na dia nanao famantarana momba ilay Fanjakana aza izany "mpanjaka" izany tamin' ny nanasitranany ny marary, tamin' ny namahanany ny vahoaka noana (Mat. toko 8; 9;12; 14--15.), dia tsy noraisin' ny olona, araka ny efa nambarany matetika: tsy azon' ireo Jiosy (na Jody) nangataka mpanjaka fa tsy maintsy hijaly izany mpanjaka izany.
I Matio sy ilay anjely, nataon'i Rembrandt, 1661
Anisan' ireo Filazantsara sinôptika, izany hoe miresaka zavatra mitovy, mitovy fijery, ny Evanjelin' i Matio. Tokony ho teo anelanelan' ny taona 70 sy 90 no nanoratana azy. Misy toko 28 ity boky ity.
1 Ny anaran' ny boky
2 Ny amin' ny fiforonan' ny boky
2.1 Ny fanoratana ny boky
2.1.1 Ny mpanoratra
2.1.2 Ny fiteny nanoratana
2.1.3 Ny fotoana sy toerana nanoratana
2.2 Ny loharano nanovozana
2.2.1 Ny loharano Q
2.2.2 Ny Filazantsaran' i Marka
3 Vontoatin' ny Filazantsara araka an' i Matio
3.1 Ireo lohahevitra ao amin' ny Filazantsaran' i Matio
3.1.1 Vaovao mahafaly
3.1.2 Fanirahana ireo mpianatra
3.1.3 Fanoharana isankarazany
3.1.4 Torohevitra ho an' ny Fiangonana
3.1.5 Andro farany
3.2 Ireo fitantarana ao amin' ny Filazantsaran' i Matio
3.2.1 Ny fahaterahan' i Jesoa sy ny fahazazany
3.2.2 Fihaonan' i Jesoa amin' i Joany mpanao batisa sy fiantsoany ireo mpianany
3.2.3 Fanasitranana nataon' i Jesoa
3.2.4 Fijalian' i Jesoa sy fitsanganany ho velona ary fanirahany ny mpianany
4 Jereo koa
Ny anaran' ny bokyHanova
Ny hoe Filazantsara araka an' i Matio, na Evanjely araka an' i Matio, dia fanagasiana ny teny grika hoe Kατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον izay vakina hoe Kata Matthaion euangélion. Amin'ny teny latina dia Evangelium secundum Matthaeum no fiantsoana azy.
Ny Prôtestanta malagasy dia manoratra hoe Filazantsara araka an' i Matio na Filazantsaran' i Matio na Filazantsara nosoratan' i Matio na Matio fotsiny.
Ny Katôlika malagasy kosa manoratra hoe Evanjely araka an' i Masindahy Matio na Evanjely nosoratan' i Masindahy Matio na Matio fotsiny. Ampiasaina koa ny hoe Vaovao Mahafaly araka an' i Matio na Vaovao Mahafaly nosoratan' i Matio.
Ny amin' ny fiforonan' ny bokyHanova
Tsy misy fomba ahafantarana tanteraka ny amin' ny mpanoratra sy ny fotoana ary ny toerana nanoratana ny Filazantsaran' i Matio. Na dia izany aza dia misy toerana sy fari-potoana heverin' ny mpikaroka ho nanoratana ilay boky.
Ny fanoratana ny bokyHanova
Araka ny lovantsofina kristiana dia i Matio, ilay mpamory hetra lasa mpianatr' i Jesoa, no nanoratra ny Filazantsara araka an' i Matio. Ny mpikaroka sasany anefa mihevitra fa olona maro nifandimby no nanoratra an' io filazantsara io, ka izany no anasokajiany an' io boky io ho pseodepigrafa.
Nipoitra teo amin' ny fiarahamonina jiosy ny mpanoratra satria manantitra ny fampiharana manontolo ny Torah (ny lalàna jiosy na ny Pentateoka), araka ny fanambaràn' i Jesoa izay nilaza fa tsy avy handrava fa hanatanteraka ny Lalàna (Mat. 5.17). Manohana izany hevitra izany koa ny fampiasana matetika ny teny faminaniana ao amin' ny Baiboly hebreo sy ny filazana ny tetiarana na ny firazanan' i Jesoa.
Ny fiteny nanoratanaHanova
Amin' ny fiteny grika (ilay atao hoe "kôine") no nanoratana voalohany ny Filazantsaran' i Matio, toy ireo filazantsara hafa, na dia misy aza ireo andalan-teny sasany voasoratra voalohany tamin' ny teny semitika (arameana/aramaika na hebreo) sy ireo mihevitra fa tamin' ny teny semitika no nanoratana.
Ny fotoana sy toerana nanoratanaHanova
Ny mpikaroka tantara momba ny asa soratra dia mihevitra fa nosoratana teo anelanelan' ny nanoratana ireo epistilin' i Paoly (teo anelanelan' ny taona 50 sy 65) sy ny Filazantsaran' i Marka (teo anelanelan' ny taona 65 sy 75) ny Filazantsaran' i Matio. Ny mpandinika maro dia mihevitra fa teo anelenelan' ny taona 70 sy 85 na 100 aza no nanoratana ilay filazantsara. Misy ny mihevitra fa tao Palestina no nanoratana io filazantsara io nefa misy koa ireo milaza fa tao Antiôkia (any Torkia ankehitriny) no nanaovana izany.
Ny loharano nanovozanaHanova
Araka ny lazain' ireo mpikaroka dia narafitra avy tamin' ny loharano roa ilay boky, dia ny Filazantsara araka an' i Marka amin' ny endriny tranainy kokoa sy ny angon-dresak' i Jesoa (na Logia) izay omen' ny mpikaroka anarana hoe "loharano Q". Ny hoe Q dia fanafohezana ny teny alemàna hoe Quelle, izay midika hoe "loharano".
Ny loharano QHanova
Ity loharano ity, izay fanangonana ny tenin' i Jesoa, dia heverin' ny mpikaroka ho nosoratana teo amin' ireo taona dimampolo (50 -- 60). Heverina ho avy amin' ny loharano Q ireo andalana sy lohahevitra tsy hita ao amin' ny Filazantsaran' i Marka nefa hita ao amin' ny Filazantsaran' i Matio sy ny Filazantsaran' i Lioka.
Ny Filazantsaran' i MarkaHanova
Hatry ny ela dia noheverina ho nosoratana talohan' ny filazantsara hafa rehetra ny an' i Matio. Ankehitriny anefa dia heverina ho faharoa manaraka ny an' i Marka izy ary hita fa naka andalana maro tao amin' izany boky izany.
Vontoatin' ny Filazantsara araka an' i MatioHanova
Fifandimbiasana fitantarana sy fifanjohian-toriteny no mamorona ny Filazantsaran' i Matio, ka ny fitantarana no mampiditra sy mamarana ny fitohizan-toriteny tsirairay.
Ireo lohahevitra ao amin' ny Filazantsaran' i MatioHanova
Ity lahateny ny amin' ity vaovao mahafaly (na filazantsara) ity dia voasoratra ao amin' ny Mat. 5.1 - 7.27 ka ireto avy ny lohahevitra hita ao:
Lalàna vaovao (Mat. 5.1-16)
Lalàna taloha (Mat. 5.17-19)
Fahamarinana vaovao (Mat. 5.20-48)
Fanavaozana ny fivavahana jiosy (Mat. 6.1-18)
Harena ety an-tany (Mat. 6.19-34)
Fifandraisana amin' ny mpiara-monina (Mat. 7.1-12)
Fampiharana ny finoana (Mat. 7.13-27)
Fanirahana ireo mpianatraHanova
Ity lahateny ity indray dia ao amin' ny Mat. 10 ka ahitana ireto lohahevitra ireto:
Toromarika nomen' i Jesoa ny mpianatra (Mat. 10.5-16)
Fanenjehana hahazo ireo iraka (Mat. 10.17-25)
Tokony hiteny mazava (Mat. 10.26-33)
Fisaratsarahana noho ny amin' i Jesoa (Mat. 10.34-36)
Fandavan-tena hanaraka an' i Jesoa (Mat. 10.37-39)
Fandraisana ireo iraka (Mat. 10.40-42)
Ny fanoharana ny amin'ny mpamafy, ao amin'ny Hortus Deliciarum, nataon'i Herrade de Landsberg ao amin'ny toeram-pitokana-monin'i Hohenbourg (tendrombohira Sainte-Odile).
Fito ireo fanoharana momba ny Fanjakan' Andriamanitra nataon' i Jesoa hita ao amin' ny Mat. 13.1-50. Ireto ny antsipiriany mafonja amin' izany:
Fanoharana ny amin' ny mpamafy (Mat. 13. 1-23).
Fanoharana ny amin' ny voan-tsimparifary (13.24-30 ).
Fanoharana ny amin' ny voan-tsinapy (13.31-32).
Fanoharana ny amin' ny masirasira (13.33).
Fanoharana ny amin' ny harena miafina (13.44).
Fanoharana ny amin' ny vatosoa (13.45-46).
Fanoharana ny amin' ny harato tarihina (13.47-50).
Torohevitra ho an' ny FiangonanaHanova
Ao amin' ny Mat. 18 no ahitana ireo torohevitra momba ny fifampitondrana eo amin'ny Fiangonana, dia ireto avy:
Iza no lehibe indrindra? (Mat. 18.1-4)
Fahatafintohinana (Mat. 18.5-11)
Ondry very (Mat. 18.12-14)
Fanitsiana ny rahalahy nanao fahadisoana (Mat. 18.15-18)
Fiaraha-mivavaka (Mat. 18.19-20)
Famelan-keloka (Mat. 18.21-22)
Fanoharana ny amin' ny mpitrosa ratsy fanahy (Mat. 18.23-35)
Fanoharana ny amin'ireo virjiny folo, sary nataon'i Phoebe Traquair.
Ny toriteny mikasika ny andro farany dia hita ao amin' ny Mat. 24 - 25. Ireto ny fizaràna hita ao:
Fanombohan' ny fahoriana (Mat. 24.4-14)
Zava-nitranga tao Jerosalema (Mat. 24.15-25)
Fahatongavan' ny Zanak' Olona (Mat. 24.26-44)
Fanoharana ny amin' ny mpanompo mpitandrin-draharaha (Mat. 24.45-51)
Fanoharana ny amin' ny virijiny folo (Mat. 25.1-13)
Fanoharana ny amin' ireo talenta (Mat. 25.14-30)
Fitsarana farany (Mat. 25.31-46)
Ireo fitantarana ao amin' ny Filazantsaran' i MatioHanova
Ireto ireo fitantarana lehibe indrindra ao amin' ny Evanjelin' i Matio:
Fahaterahan'i Jesoa, sary nataon'i Botticelli, taona 1473-1475
Ny fahaterahan' i Jesoa sy ny fahazazanyHanova
Filazana ny razan' i Jesoa (Mat 1.1-17)
Fanambaràn' ny anjely ny hahaterahan' i Jesoa (Mat. 1.18-)
Famangian' ny magy (na majy) an' i Jesoa (Mat. 2.1-12)
Fitondrana mandositra an' i Jesoa zazakely (Mat. 2.13-15)
Fampamonoan' i Herôda ny zazakely tao Betlehema (Mat. 2.16-23)
(Jereo koa ny pejy "Evanjelin' ny fahazazana")
Fantsoana ireo apôstôly, sary nataon'i Domenico Ghirlandaio, taona 1481-82
Fihaonan' i Jesoa amin' i Joany mpanao batisa sy fiantsoany ireo mpiananyHanova
Fahenoan' i Joany (na Jaona) mpanao batisa ny amin' i Jesoa sy ny nataony (Mat. 3.1-12)
Fanaovana batisa (na batemy) an' i Jesoa (Mat. 3.13-17)
Fakan' ny devoly fanahy an' i Jesoa (Mat. 4.1-11)
Fankanesan' i Jesoa tany Galilea (na Galilia) (Mat. 4.12-17)
Fiantsoan' i Jesoa an' i Petera (na Piera) sy Andrea sy Jakoba ary Joany (Mat. 4.18-25)
Fiantsoan' i Jesoa an' i Matio (Mat. 9.9-17)
Fiantsoana ireo Apôstôly 12 (Mat. 9.35 - 10.4)
Fanirahana nataon' i Joany mpanao batisa any amin' i Jesoa (Mat. 11.2-19)
I Herôda sy i Joany mpanao batisa (Mat. 14.1-23)
Fiovan' i Jesoa tarehy teo an-tendrombohitra (Mat. 17.17-13)
Fitondrana zazakely teo amin' i Jesoa (Mat. 19.13-15)
Fiakaran' i Jesoa tany Jerosalema (Mat. 21.21-11)
Fandroahana ireo mpivarotra teo an-tempoly (Mat. 21.12-17)
Fanasitranana nataon' i JesoaHanova
Fandehanan' i Jesoa eran' i Galilea hampianatra sy hanasitrana marary (Mat. 4.23-25)
Fanasitranana nataon' i Jesoa (Mat. 8.1-17)
Famoahana demonia maro nataon' i Jesoa (Mat. 8.28-34)
Fanasitranana ilay lehilahy malemy (Mat. 9.1-8)
Fanasitranan' i Jesoa vehivavy narary roa ambin' ny folo taona sy fananganana zaza efa maty (9.18-26)
Fampahiratana ny jamba (Mat. 9.27-31)
Fampitenenana ny moana (Mat. 9.32-34)
Fanasitranana olona maty tanana tamin' ny andro Sabata (Mat. 12.9-21)
Fanasitranana olona demoniaka (Mat. 12.22)
Fanasitranana ny zanakavavin' ny vehivavy kanaanita (Mat. 15.21-28)
Fanasitranana nataon' i Jesoa sy famokisany olona efatra arivo (Mat. 15.29-39)
Fanasitranana zaza nampahorin' ny demonia (Mat. 17.14-21)
Fampahiratana ny jamba tao akaikin' i Jerikô (Mat. 20.29-34)
Fijalian' i Jesoa sy fitsanganany ho velona ary fanirahany ny mpiananyHanova
Fihendren' ny loholona sy ny mpisorona hamono an' i Jesoa (Mat. 26.1-5)
Fanosoran' ny vehivavy iray menaka ny tongotr' i Jesoa (Mat. 26.6-13)
Faneken' i Jodasy hamadika an' i Jesoa (Mat. 26.14-16)
Fihinanan' i Jesoa ny paska miaraka amin' ireo mpianany (Mat. 26.17-29)
Fankanesana tany amin' ny tendrombohitra Ôliva (Mat. 26.30-35)
Jesoa tao Getsemane (Mat. 26.36-56)
Fitsarana an' i Jesoa teo amin' i Kaiafa (na Kaifa) sy ny nandavan' i Petera azy intelo (Mat. 26.57-75)
Fitsaran' i Pilato an' i Jesoa (Mat. 27.1-26)
Fanomboana an' i Jesoa (Mat. 27.27-56)
Fandevenana an' i Jesoa (Mat. 27.57-66)
Fitsanganan' i Jesoa ho velona (Mat. 28.1-20).
Ireo evanjely kanônika hafa
Filazantsara araka an' i Marka
Filazantsara araka an' i Lioka
Filazantsara araka an' i Joany
Boky hafa ao amin' ny Baiboly
Epistilin' i Paoly
Asan' ny Apôstôly
Apôkalipsin' i Joany
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Filazantsara_araka_an%27_i_Matio&oldid=1038895"
Dernière modification le 13 Oktobra 2021, à 12:42
Voaova farany tamin'ny 13 Oktobra 2021 amin'ny 12:42 ity pejy ity.